トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Endri-javatra - jereo ny alalan 'ny lalana mankany amin'ny onjan-ROM dia fiarovana vanim-potoana
Pachinko milina jackpot tapaka ao ROM fitantanana rehetra. Raha Minukere dingana mafy ny ROM, ny ambony ny mety izay givin ny jackpot. Noho izany, na misy lafiny tsara ny dingana ny ROM, ary avy eo amin'ny an-tsipiriany ny fanazavana.
Rom Mahery, ny famantarana mora ny namely ny jackpot mivoaka isan-karazany. Indrindra indrindra, ny famokarana sy tonga, dia miezaha hifantoka amin'ny fomba hira. , Ohatra, dia ny vokatra sy ny fampisehoana, isan-karazany ny famokarana sy hahatratra dia na toerana matetika.
isan-dia nijanona kely aza, ianao, na hihena marika isan-reliably amin'ny hafanana mafy ny tratrarina. Ankoatra izany, ianareo hiaina ny fihoaram--miverina ara-potoana fampihenana, sns na nasandratry eo amin'ny manodidina, dia heveriko fa tonga matanjaka ho fe-potoana.
Avy eo, ao amin'ny vanim-potoana mora, na dia mety hitranga dia mifampiresaka Chang, koa iray amin'ireo vanim-potoana mafy ny fizotran'ny mety fiovaovana avy hatrany ny jackpot. , Ohatra, fa tsy mijanona fotsiny, satria tsy tonga ao an-fohy kokoa fitokonana miasa ora, dia mikasika ny 200 revolisiona miezaka milalao amin'ny faharetana.
talohan'ny nihazakazaka avy any amin'ny boaty, koa ianareo tahaka ny zavatra azo esorina ny lehibe hira, heveriko fa misy zavatra izay hiaina. Arahina tsara mikoriana, dia tsy doha, raha misy zavatra toy izany na dia tonga namely nijanona avy hatrany ao amin'ny isan-manaraka, ka mety ny vanim-potoana mafy.
hijoro amin 'ny endri-javatra toy izany ao mihetsika, dia ho teo ambony latabatra izay mety ho tonga amin'ny ny endri-javatra amin'ny vanim-potoana mahery, mihevitra aho fa mety ho fanahy iniana milalao try.
Avy eo, ao amin'ny pachinko efi-trano, misy tarehimarika ny fivakisana isa. Io no modely tena no ho sarin-firongatry isika ho any amin'ny alalan'ny fampihenana ny mpanjifa. Pachinko ?ry tsena, ianao na miova fantsika fanitsiana sy ny toy izany.
pachinko lafiny efi-trano, raha tsy miova kosa ny isan'ny fivakisana, ianao koa dia ho andro vitsivitsy nanaraka tsara ny fotoana. Strong dingana ny ROM no hany zavatra Hita avy hatrany amin'ny alalan'ny milalao on. Izany dia, raha mijery, indrindra fa ao amin'ny antontan-kevitra sary, dia ho mora kokoa ny hahatakatra bebe kokoa.
mafy tsara indrindra amin'ny fototry ny angon-drakitra Ianao, azafady mba jereo ny alon-isan'ny andalana revolisiona sy ny kisary. Koa satria ny jackpot no arahina, miezaka ny hifidy ny latabatra kely rotational hafainganam-pandehan'ny ny andro. Ary amin 'izany, ny sehatra ho avy isaky ny 200 fihodinan'ny aloha sy aorian'ny manaraka ao amin'ny mijanona kely doha, dia aoka ny hametraka ny mety onjam-mahery avy any an-tsaha ny fijery.
taorian'ny vanim-potoana ara-dal?na, fantaro mafy ny sisin-tanin'ny tezitra-fiainana, ka zava-dehibe ny hijanona amin'ny fotoana faran'izay betsaka izay afaka tombony tsy misy simbasimba fampiasam-bola.
, rehefa tsotra ny fiainana, na ho maika ny tezitra dia tsy maintsy mialoha ny fiainana ny, ohatra, ao amin'ny tahirin-kevitra momba ny taloha. Ankehitriny, satria sarotra ny mamaritra afa-tsy ao amin'ny fitondran-tena ny latabatra milalao ianao, dia aoka ny miaraka amin'ny angon-drakitra mba hahafantarana avy amin'ny fomba fijery roa.